Ịbịa Ihe n’Oge
Gbanwee otú ọ ga-esi egosi
Ihe Anyị Ga-eme Ka Anyị Ghara Ịna-ebutekarị Ọrịa
Otú Ị Ga-esi Zere Ihe Ndị Na-akpata Ọrịa
Eriri Ndị Na-esi n’Ahụ́ Akịrịkọ Apụta
Otú Ị Ga-esi Na-akwanyere Di Gị ma Ọ Bụ Nwunye Gị Ùgwù
Azụ̀ Clown Dị́ Ịtụnanya
Isiokwu Ndị E Bipụtara na Teta! n’Afọ 2016
Nke Asatọ: Na-adị Ọcha
Baịbụl Ò Kwuru Ka Anyị Na-agba Krismas?
TETA! Nke 6 n'Afọ 2016
Ọtụtụ ndị na-anaghị abịa ihe n’oge maara na ịbịa ihe n’oge dị mma. E nwere ọtụtụ ihe Baịbụl kwuru ga-abara anyị uru gbasara ịbịa ihe n’oge.
Olee otú ịbịa ihe n’oge dịruru ná mkpa?
IHE MERE O JI DỊ MKPA
Ụfọdụ ndị achọpụtala na ịbịa ihe n’oge na-eme ka ahụ́ ruo mmadụ ala. Ọ na-emekwa ka mmadụ nwekwuo ùgwù. Gịnị mere anyị ji kwuo otú ahụ?
Ịbịa ihe n’oge na-egosi na mmadụ ma ihe ọ na-eme. Ọ bụrụ na mmadụ ana-abịa ihe n’oge, ọ na-egosi na onye ahụ na-ahazi onwe ya nke ọma, nakwa na ọ naghị ekwe ka ihe ọ bụla gbochie ya ime ihe ọ chọrọ ime.
Ịbịa ihe n’oge na-egosi na mmadụ bụ onye a ga-atụkwasịli obi. N’ụwa a ọtụtụ ndị na-anaghị emezu nkwa ha, ndị mmadụ hụ onye na-emezu nkwa ya, ha na-akwanyere ya ùgwù. Ọ bụrụ na mmadụ bụ onye a ga-atụkwasịli obi, ndị ezinụlọ ya na ndị enyi ya ga na-akwanyere ya ùgwù. Ndị isi ọrụ anaghị eji onye na-abịa ọrụ n’oge ma na-arụpụta ọrụ e nyere ya n’oge egwu egwu. A na-etinyere ụdị ndị a ego n’ụgwọ ọnwa ha, buliekwa ha n’ọkwá.
O nwere ebe ụfọdụ Baịbụl kwuru ihe ndị gbasara ịbịa ihe n’oge. Dị ka ihe atụ, Baịbụl kwuru, sị: “Ka e mee ihe niile n’ụzọ kwesịrị ekwesị nakwa n’usoro.” (1 Ndị Kọrịnt 14:40) Ọ bụrụ na mmadụ abụọ eyie agba, ha kwesịrị ịbịa n’oge. Baịbụl sịkwara na “e nwere oge a kara aka maka ihe ọ bụla, ihe ọ bụla a na-eme n’okpuru eluigwe nwekwara oge.” (Ekliziastis 3:1) Amaokwu na-esote ya sịkwara na e nwere “oge ịkụ ihe na oge ifopụ ihe a kụrụ.” (Ekliziastis 3:2) Ndị ọrụ ugbo na-akụ ihe n’ugbo ha n’oge kwesịrị ekwesị ka ihe ha kụrụ nwee ike ime nke ọma. Ihe ọ pụtara bụ na onye ọrụ ugbo kụọ ihe n’oge, ihe ọ kụrụ ga-eme nke ọma.
Baịbụl kwuru ihe kachanụ mere anyị kwesịrị iji na-abịa ihe n’oge. Ọ na-egosi na anyị na-akwanyere ndị ọzọ ùgwù nakwa na anyị anaghị emebisịrị ha oge ha. (Ndị Filipaị 2:3, 4) E nwekwara ike ikwu na onye na-emebisịrị ndị ọzọ oge ha, na-ezuru oge ha n’ohi.
“Na-elekwasị anya, ọ bụghị naanị n’ọdịmma onwe unu, kamakwa n’ọdịmma nke ndị ọzọ.”—Ndị Filipaị 2:4.
Olee ihe ndị nwere ike inyere gị aka ịna-abịa ihe n’oge?
Baịbụl sịrị na anyị kwesịrị ịna-eme atụmatụ nke ọma tupu anyị emewe ihe. (Ilu 21:5) Ị chọpụta na ị naghị abịakarị ihe n’oge, leruo onwe gị anya, ọ ga-abụ na o nwere ọtụtụ ihe ị chọrọ ime otu mgbe. Lee ma ị̀ ga-agbalị hapụ ihe ndị na-adịchaghị mkpa. Gị na ndị mmadụ yiwe agba, hazie agba ndị ahụ otú oge ga-ezuru gị ịga nke ọ bụla n’ime ha n’oge. Ime ya otú a ga-abara gị uru, adịghị ama ama e nwee ihe dapụtaranụ, dị ka mmiri ozuzo.
Baịbụl gwakwara anyị ka anyị mara ebe ike anyị ruru. (Ilu 11:2) N’ihi ya, mgbe gị na mmadụ na-eyi agba ma ọ bụ mgbe ị na-ekweta ihe ị ga-eme, buru ụzọ chọpụta ma ị̀ ga-emeli ya. I kweta ime ihe ndị ị ma na ị gaghị emeli ga-akpatara ma gị ma ndị ọzọ nchegbu na obi ọjọọ.
Baịbụl gbakwara anyị ume iji oge anyị na-eme ihe bara uru. (Ndị Efesọs 5:15, 16) Na-ebu ụzọ eme ihe ndị kacha mkpa. (Ndị Filipaị 1:10) Dị ka ihe atụ, jiri oge ị nọ n’ụgbọala ma ọ bụ oge i ji na-eche mmadụ na-agụ akwụkwọ ma ọ bụ na-ahazi ihe ndị i nwere ime n’ụbọchị.
“Atụmatụ onye dị uchu aghaghị iweta uru.”—Ilu 21:5.
mailto:?body=Ịbịa Ihe n’Oge%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D102016210%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ịbịa Ihe n’Oge
Nke 6 n'Afọ 2016 Ihe Anyị Ga-eme Ka Anyị Ghara Ịna-ebutekarị Ọrịa
mailto:?body=Nke 6 n'Afọ 2016 Ihe Anyị Ga-eme Ka Anyị Ghara Ịna-ebutekarị Ọrịa%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fpub%3Dg16%26issue%3D201612%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nke 6 n'Afọ 2016 Ihe Anyị Ga-eme Ka Anyị Ghara Ịna-ebutekarị Ọrịa
Na-ekele Ndị Meere Gị Ihe Ọma?
Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Gbasara Mma Elu Ahụ́?
Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Banyere Okwukwe?
Ihe Baịbụl Kwuru Gbasara Nchegbu
Usoro Ihe Omume—Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ
Akụkọ Ndị Kacha Ọhụrụ
Ndị Na-ahụ Maka Okwu Ikpe
Okwu Ikpe Ndị E Nwere ná Mpaghara ná Mpaghara
Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị Gbasara Ndịàmà Jehova
Ọmụmụ Ihe Anyị
Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị
Mgbakọ Ndị Anyị Na-enwe
Ihe Ndịàmà Jehova Na-eme
Gaa Legharịa Anya n’Ụlọ Ọrụ Anyị
Detara Anyị Akwụkwọ Ozi
Copyright © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.